insimbi engagqwali futha submersible
Amaphampu we-slurry avundlile
Iphampu Yegwebu Elivundlile
I-TZSH High Chrome Alloy Slurry Pump
TZX uchungechunge High Head Slurry Pump
Thayipha i-UHB-ZK Corrosion Resistant Mud Mud Pump
Izingxenye ze-Polyurethane PU Slurry Pump
Uchungechunge lwe-TZSA Compact Slurry Pump
I-QJ Insimbi engagqwali iphampu engaphansi kwamanzi (ipompo yomthombo ojulile) incazelo yomkhiqizo
Iphampu engaphansi kohlobo lwe-QJ iyiphampu yenjini nezamanzi iqonde ngqo emanzini ingene emsebenzini wemishini yokuphakamisa amanzi, ilungele ukukhishwa emithonjeni ejulile yamanzi angaphansi komhlaba ingase isetshenziselwe imifula, amadamu, imisele kanye namanye amaphrojekthi okuphakamisa amanzi: ikakhulukazi ngenkasa yasepulazini kanye nentaba eyithafa Yamanzi abantu nezilwane, kodwa futhi amadolobha, izimboni, izitimela, izimayini, indawo yokusetshenziswa kwamanzi.
I-QJ Insimbi engagqwali impompo engaphansi kwamanzi (ipompo yomthombo ojulile) izici
1. Injini, iphampu yamanzi eyodwa, nyonyoba emanzini ukuze isebenze, iphephile futhi inokwethenjelwa.
2. Asikho isidingo esikhethekile sepayipi lomthombo kanye nepayipi lamanzi (okungukuthi, umthombo wepayipi lensimbi, umthombo wepayipi lomlotha, umthombo wenhlabathi nokunye kungasetshenziswa; ngaphansi kwemvume yokucindezela, ipayipi lensimbi, ipayipi, ipayipi lepulasitiki nokunye kungase kusebenze njengepayipi lamanzi).
3. Ukufakwa, ukusetshenziswa, ukugcinwa okulula Simple, footprint encane, asikho isidingo sokwakha igumbi futha.
4. Isakhiwo esilula, ukonga izinto zokusetshenziswa.
Ukusetshenziswa kwepompo ye-submarine kwezimo kufanelekile, ukuphathwa okufanele kanye nempilo yobudlelwano obuqondile.
I-QJ Insimbi engagqwali iphampu engaphansi kwamanzi (ipompo yomthombo ojulile) cizimo Zokusebenzisa
Uhlobo lwe-QJ amaphampu angaphansi kwamanzi angasetshenziswa ngokuqhubekayo ngaphansi kwezimo ezilandelayo:
1. Ukunikezwa kwamandla ezigaba ezintathu ze-AC nemvamisa elinganiselwe engu-50HZ kanye ne-voltage elinganiselwe engu-380 ± 5% V.
2. I-pump inlet kufanele ibe ngaphansi kwemitha eli-1 ngaphansi kwezinga lamanzi anyakazayo, kodwa ukujula kwe-dive akufanele kudlule amamitha angu-70 ngaphansi kwezinga le-hydrostatic. Ingxenye engezansi yenjini okungenani iyimitha elingu-1 ngaphezu kokujula kwamanzi angaphansi.
3. Izinga lokushisa lamanzi ngokuvamile alikho ngaphezu kuka-20 ℃.
4. Izidingo zekhwalithi yamanzi: (1) okuqukethwe kwamanzi emanzini akungaphezu kuka-0.01% (isilinganiso sesisindo);
(2) PH inani kububanzi obungu-6.5 ~ 8.5;
(3) okuqukethwe kwe-chloride okungengaphezu kuka-400 mg/l.
5. Idinga inani elihle, udonga lubushelelezi, alukho olunyakazayo.
I-QJ Insimbi engagqwali impompo engaphansi kwamanzi (ipompo yomthombo ojulile) incazelo yesakhiwo
Iyunithi yepompo ye-1.QJ yohlobo lwe-submersible iqukethe: iphampu yamanzi, injini engaphansi kwamanzi (kuhlanganise nekhebula), amapayipi amanzi kanye neswishi yokulawula eyakhiwe izingxenye ezine.
Iphampu engaphansi kwe-submersible ye-single-suction multi-stage multi-stage centrifugal fugal: Injini engaphansi kwamanzi emanzi evaliwe egcwele amanzi, mpo yekheji yezigaba ezintathu engavumelanisi injini, injini kanye nepompo ngokusebenzisa uzipho noma ukuhlangana kwesigubhu esisodwa ngqo; ifakwe imininingwane ehlukene yekhebula le-Core emithathu; ukuqala imishini yamazinga ahlukene womthamo wokushintsha komoya kanye ne-self-decompression starter, ipayipi lamanzi lobubanzi obuhlukene bepayipi lensimbi elenziwe ngokuxhunywa kwe-flange, ipompo ephezulu yokuphakamisa ngokulawula isango.
2. Iphampu engaphansi kwamanzi Isigaba ngasinye se-baffle sifakwe i-rubber bear; i-impeller igxilwe ku-shaft yepompo ngomkhono we-tapered; i-baffle intambo noma ibolted.
3. Ipompo ye-submersible ephakeme kakhulu ene-valve yokuhlola engxenyeni engenhla, ukugwema isikhathi sokuphumula esibangelwa ukulimala kweyunithi.
4. I-submarine motor shaft ene-sandstand ye-labyrinth kanye nokuhlanganiswa okuphambene okubili kwe-skeleton oil seal, ukuvimbela ukugeleza kwesihlabathi kunjini.
5. I-motor submersible enama-bearings agcotshwe ngamanzi, ingxenye engezansi yefilimu elawula ingcindezi yenjoloba, intwasahlobo elawula ukucindezela, eyakhiwe ngegumbi lokuhlinzwa, lungisa ukucindezela okubangelwa ukushintsha kwezinga lokushisa; ukusonteka kwemoto nge-polyethylene insulation, ijakhethi enayiloni amanzi ahlala isikhathi eside wezimpahla zabathengi, Ukuxhunywa kwekhebula ngobuchwepheshe besixhumi sekhebula lohlobo lwe-QJ, isixhumi esivala ungqimba kapende, sasixhunywe, sishiselwa ngokuqinile, ngerabha eluhlaza ezungeze ungqimba. Bese isongwe nge-adhesive tape engavimbeli amanzi izendlalelo ezi-2 kuya kwezingu-3, ​​ngaphandle kwephakheji ku-2 kuya kwezingu-3 ze-tape engangeni manzi noma i-glue nge-layer ye-raber tape (ibhande lebhayisikili) ukuvimbela ukuphuma kwamanzi.
6. Injini ivalwe uphawu, ivalwe ngebhawodi yokumisa eqondile kanye ne-cable outlet.
7. Ingxenye engenhla ye-motor inomgodi wokujova amanzi, kukhona umgodi wokuphuma, ingxenye engezansi yomgodi wamanzi.
8. Ingxenye engezansi yenjini ene-thrust engaphezulu nangaphansi, i-thrust ehambisana ne-groove ukuze iphole, futhi igaya ipuleti le-stainless steel thrust, ne-pump up and down axial force.
I-QJ Insimbi engagqwali iphampu engaphansi kwamanzi (ipompo yomthombo ojulile) isimiso sokusebenza
Ngaphambi kokuvula iphampu, ipayipi lokudonsa kanye nepompo kufanele ligcwaliswe ngoketshezi. Ngemuva kokuthi iphampu iphonswe, i-impeller ijikeleza ngesivinini esikhulu, futhi uketshezi lujikeleza nge-blade. Ngaphansi kwesenzo samandla e-centrifugal, ishiya i-impeller ngaphandle futhi uketshezi luyancipha kancane kancane futhi ingcindezi ikhula kancane kancane kusukela ku-Export yepompo, ukuphuma kwepayipi lokukhipha. Kuleli qophelo, enkabeni yensingo enkabeni yoketshezi iphonswa endaweni ezungezile futhi ukwakheka kwakho kokubili akukho moya futhi akukho mshini wokuvala uketshezi endaweni yokucindezela okuphansi, ichibi loketshezi echibini lokucindezela komkhathi ngaphansi kwesenzo sokumunca. iphayiphi empompini, uketshezi luqhubeka njalo Lumuncwa njalo echibini loketshezi futhi lugeleza ngokuqhubekayo luphuma epayipini lokukhipha.
I-QJ Insimbi engagqwali iphampu engaphansi kwamanzi (ipompo yomthombo ojulile) use kanye nezici
Ipompo ye-submersible yohlobo lwe-QJ isekelwe kumazinga kazwelonke aklanyelwe imikhiqizo yokonga ugesi, esetshenziswa kabanzi ekuniseleleni emapulazini, amabhizinisi ezimboni kanye nezimayini ukuze kutholakale amanzi kanye nokukhipha amanzi, amathafa, abantu bezintaba, amanzi emfuyo.
Iphampu iqukethe i-QJ submersible pump kanye ne-YQS submersible motor ibe ngaphansi kwamanzi eyodwa ukuze isebenze ngaphansi kwamanzi. Ngesakhiwo esilula, usayizi omncane, isisindo esilula, ukufakwa, ukugcinwa okulula, ukusebenza okuphephile, okuthembekile, ukonga amandla nokunye.
Uchungechunge lwemithombo ye-QJR enephampu ekwazi ukumelana nokushisa ekwazi ukumelana nokushisa kahle ne-diving ekwazi ukumelana nokushisa enezigaba ezintathu ze-asynchronous motor ngqo ibe eyodwa, ihlanganiswe empompini ekwazi ukumelana nokushisa, izinga lokushisa lamanzi ashisayo afinyelela ku-100 ° C, licwiliswe emthonjeni. , Amanzi iyithuluzi eliphumelelayo; i-geothermal ingenye yamandla akamuva ashibhile, ahlanzekile, angashi, manje asetshenziswa kabanzi ekushiseni, kwezokwelapha, ekugezeni, ekuzaleni, ekutshaleni, ezimbonini nasezolimo, ezimbonini nasezimayini, ezinsizeni zokuzijabulisa, ezikhungweni zezempilo, isici. Inezinzuzo zokusebenza okulula, ukusebenza okuthembekile, akukho msindo, ukusebenza okuhle kakhulu, ukusebenza kahle okuphezulu kweyunithi, ukufakwa kalula nokugcinwa. Inezinzuzo eziningi njengokumelana nokushisa, ukumelana nokugqwala kanye nokulwa nokuguga. Iwumkhiqizo wakamuva wamanzi ashisayo e-embankment.
1. Ukusetshenziswa okuqondile, njengasemthonjeni ojwayelekile;
2. Ukusetshenziswa kwe-oblique, njengasemayini enomgwaqo otshekile;
3. Ukusetshenziswa okuvundlile, njengasechibini
I-QJ Iphampu kagesi engaphansi kwamanzi yomthombo (ipompo yomthombo ojulile) Izinyathelo zokuphepha
1. Amaphampu angaphansi kwamanzi kufanele asetshenziswe esihlabathini esingaphansi kuka-0.01% womthombo wamanzi, igumbi lepompo elifakwe ithangi langaphambi kwamanzi, umthamo kufanele uhlangabezane nokuqala kwamanzi asetshenziswe ngaphambilini.
2. Ipompo yomthombo ojulile omusha noma owenziwe kabusha, kufanele ulungise igobolondo lepompo kanye ne-impeller clearance, i-impeller ekusebenzeni akufanele ingqubuzane negobolondo.
3. Iphampu yomthombo ojulile kufanele isebenze ngaphambi kokuba amanzi angene emgodini futhi ithwale igobolondo ukuze isetshenziswe ngaphambili.
4. Ngaphambi kokuqala kwepompo yomthombo ojulile, izinto zokuhlola kufanele zihlangabezane nezidingo ezilandelayo:
1) amabhawodi ayisisekelo ayaqiniswa;
2) imvume ye-axial ukuhlangabezana nezidingo, ukulungisa amantongomane omshudo afakiwe;
3) indlala yokupakisha iqinisiwe futhi igcotshiwe;
4) ama-motor bearings agcotshiwe;
5) Zungezisa i-motor rotor futhi umshini wokumisa ngesandla uyaguquguquka futhi uyasebenza.
5. Ipompo yomthombo ojulile ayikwazi ukungenzi lutho esimweni samanzi. Amaphampu I-impeller eyodwa noma amabili kufanele acwiliswe ngaphansi kwezinga lamanzi elingu-1m. Ukusebenza kufanele njalo kubheke izinguquko ezingeni lamanzi emthonjeni.
6. Ngesikhathi sokusebenza, lapho uthola ukudlidliza okukhulu eduze kwesisekelo, kufanele uhlole ukuthwala kwepompo noma ukugqoka kwe-motor filler; lapho ukuguga ngokweqile nokuvuza, kufanele kuthathe indawo yezingcezu ezintsha.
7. iye yamuncwa, yakhanywa ngepompo yomthombo ojulile wodaka, ngaphambi kokumisa iphampu, ukufakwa kwe-rinse yamanzi.
8. Ngaphambi kokumisa iphampu, kufanele uvale i-valve yamanzi, unqume amandla, ukhiye ibhokisi lokushintsha. Lapho ubusika bukhubazekile, amanzi kufanele afakwe empompini.
Umshwana wokuzihlangula: Impahla ebhaliwe yengqondo eboniswe kumkhiqizo(imikhiqizo) osohlwini ingeyabantu besithathu. Le mikhiqizo inikezwa kuphela njengezibonelo zamakhono ethu okukhiqiza, futhi ayithengiswa.
Okwedlule: Izinkampani Eziphuma Kahle Kakhulu ZaseShayina Zephampu Yephampu - uhlobo lwe-SYB-Type Enhanced Self-primping Disc Pump – Boda
Olandelayo: I-Antiabrasive Slurry Value
Iphampu yamanzi engu-12v
1hp Iphampu Yamanzi
2hp Iphampu Yamanzi
5hp Iphampu Yamanzi
Iphampu lamanzi elizenzakalelayo
Iphampu Yamanzi Esebenza Ngebhethri
Iphampu Yamanzi Apholile
Iphampu Yamanzi Ejulile
Iphampu Yamanzi Yedizili
Impompi Yamanzi Angcolile
Iphampu Yamanzi Yokudonsa Kabili
Iphampu Yamanzi Kagesi
Iphampu Yamanzi Engadini
Iphampu Yamanzi Esebenza Ngegesi
Iphampu Yamanzi Yegesi
Iphampu Yamanzi Yesandla
Iphampu Yokuzungeza Amanzi Ashisayo
Iphampu Yamanzi Ashisayo
Iphampu Elijikeleza Ngamanzi Ashisayo
Amanzi Ashisayo Recirculating System
Iphampu Yamanzi Emanuwali
I-Multistage Water Pump
Iphampu Yamanzi Kaphethiloli
Iphampu lamanzi lepayipi
Iphampu Yamanzi Ephathwayo
Iphampu Yamanzi ye-Rv
Iphampu Yamanzi Yokuzilibazisa
Iphampu Yamanzi Esebenza Ngelanga
Iphampu Yamanzi Yelanga
Iphampu yamanzi engaphansi kwamanzi
Iphampu Yokuqinisa Amanzi
Iphampu Yesici Samanzi
Iphampu Lomthombo Wamanzi
Iphampu Yejet Yamanzi
Iphampu yeSump Esebenza Ngamanzi
I-Water Pressure Booster
Iphampu ye-Water Pressure Booster
Iphampu Yokucindezela Amanzi
Ithangi Lokucindezela Amanzi
Iphampu Yamanzi Aquarium
Iphampu Yamanzi Yendlu
Umshini Wokumpompa Amanzi
I-Water Pump Rubber Cap
I-Water Pump Rubber Seal
Iphampu Yokudonsa Amanzi
Ithangi Lamanzi Elinephampu
Iphampu Yokudlulisa Amanzi
Iphampu Yamanzi Kahle
Izingxenye zephampu ye-slurry abrasive Slurry Pump Impeller
IPWL Iphampu Yendle
Izingxenye ze-Slurry Pump Spare
I-SFX-Type Enhanced Self-Priming
I-Shijiazhuang Boda Industrial Pump Co., Ltd iyinhlangano esebenzela imakethe yephampu yamazwe ngamazwe e-PRC. Isebenza ikakhulukazi imishini yepompo nepompo eqhutshwayo, izingxenye zokumpompa nokumelana nokugqoka ama-castings, eminye imishini ye-hydraulic, izesekeli njll.